လူငယျအမြားစုကတော့ မလုပျကွတဲ့ အပွငျ Self-study ကဘာကွီးလဲလို့ ပွနျမေးတဲ့သူရှိသလို လုပျဖို့မလိုပါဘူး လို့ခံယူကွသူတဈခြို့လညျး ရှိနပွေနျပါတယျ။ အါ့တှေ အသာထားဦး ပွဿနာက ဘာလဲဆိုတော့ ဆရာတှကေိုယျတိုငျ အစစအရာရာ သခြောလိုကျလုပျပေးပွီး အားလုံးအဆငျသငျ့ ဒါကိုကွညျ့၊ ဒါကိုကကျြ၊ ဒါကိုဖတျ၊ ဒါကိုမှတျ ဆိုတာတောငျ ခပျပေါ့ပေါ့နဲ့ အလေးအနကျလညျးမထား ဘာမှလိုကျမလုပျကွတာပါ ပွောရရငျ ဆရာတှကေ ငှကျပြောသီးကြှေးတာကို အခှံကအစ နှာထားပေးပွီးသား ခှံ့တောငျကြှေးနပေမေယျ့ ဝါးစားလိုကျဖို့လေးကို မစားနိုငျ မဝါးနိုငျတှေ ဖွဈနကွေတဲ့ သဘောပေါ့ ဒါအရှငျးဆုံး ဥပမာပါပဲ။
တခွားနိုငျငံတှနေဲ့ ကှာခွားနကွေရတဲ့ အခကျြတှထေဲမှာ ဒီတဈခကျြလညျး ပါဝငျပါတယျ။ “နိုငျငံခွားက လူတှကေ အရမျးတျောကွတာပဲ သူတို့ပညာရေးက သိပျကောငျးတာကိုး ထောကျပံ့မှုတှေ အမြားကွီးလေ” ဆိုပွီး ပညာရေးစနဈကိုပဲ လကျညိုးထိုးနကွေတာ မြားပါတယျ။ ပညာရေးစနဈက ယှဉျကွညျ့ရငျတော့ မှနျပါတယျ ဒါပမေယျ့ ဒါတဈခုတညျးကိုပဲ အပွဈတငျနလေို့ မရဘူးလေ။ ပညာရေးစနဈ ဘယျလောကျကောငျးကောငျး လူမကောငျးရငျ၊ မကွိုးစားရငျ အလကားပါပဲ။ သူတို့နိုငျငံတှမှောက ကြောငျးတှမှော သငျယူတာအပွငျ ကိုယျ့ဘာသာ self-study အရမျးလုပျကွတာကိုး တျောမှာပေါ့။ စာတှေ အရမျးဖတျကွတာကိုး သိကွမှာပေါ့။ အပျေါယံလောကျလေး မကွညျ့နဲ့လေ။ သူတို့ဘယျလို ကွိုးစားတယျ ဆိုတာကိုလညျး အတုယူဖို့ ကွိုးစားကွညျ့ပါလား။
ကိုယျသငျထားတဲ့ဟာတှကေို review ပွနျလုပျလား၊ ဘယျလောကျထိမြား ပွနျလလေ့ာလဲ၊ သကျဆိုငျတဲ့ ဗဟုသုတတှေ ရှိလား စာတှဖေတျလား။ Self-study ဆိုတာက ဥပမာ ကိုယျက Business သငျနတေယျ ဆိုရငျ Business ကဘာလဲ ပွောနိုငျရမယျ ရှငျးပွနိုငျရမယျ။ Business နဲ့ ပကျသကျတဲ့စာတှေ အမြားကွီး ဖတျရမယျ လလေ့ာရမယျ online ကနေ ရှာရမယျ သငျထားတဲ့ Theory တှကေို ဘယျလို လကျတှမှေ့ာ အသုံးခရြမလဲ လလေ့ာရမယျ ဒီလိုဖွဈနရေမှာပါ။ ဒါမှ ကိုယျသငျယူနတေဲ့အရာအပျေါမှာ တကယျ ကြှမျးကငျြမှုတှေ ဗဟုသုတတှေ ရှိလာမှာပေါ့။ ဒီလိုမဟုတျပဲ self-study လုပျဖို့မပွောနဲ့ ဆရာအိမျစာ ပေးထားတာလေးတောငျ မလုပျဘူး မကွညျ့ဘူး ဆိုရငျတော့ ဘယျဖွဈမလဲ။
ဒါဆိုရငျ Self-study ဆိုတာက ဘယျလောကျအရေးကွီးလဲ၊ အကြိုးသကျရောကျမှု ဘယျလောကျရှိလဲ သိလောကျပွီ ထငျပါတယျ။ “Self-study တော့လုပျခငျြတယျ ဒါပမေယျ့ ဘယျလိုလုပျရမှာလဲ” ဆိုရငျ Self-study လုပျဖို့အတှကျ အရေးကွီးတဲ့ အခကျြလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
တဈခုခုလုပျတော့မယျဆို အခြိနျပေးဖို့ လိုတယျလေ ဒီလိုပါပဲ Self-study လုပျဖို့လညျး သီးသနျ့အခြိနျပေးဖို့ လိုပါတယျ။ တခွားတဈခုခုလုပျရငျးနဲ့ study လုပျလို့မရဘူးလားဆိုတော့ ရပါတယျ ဒါပမေယျ့ အဲ့လောကျကွီးတော့ effective မဖွဈဘူးပေါ့။ ကိုယျ့ဘာသာ လလေ့ာဖို့ကို သီးသနျ့အခြိနျလေး သတျမှတျထားတယျ၊ ပေးထားတယျဆိုရငျ ပိုပွီးလညျး ထဲထဝငျဝငျလလေ့ာနိုငျတယျ၊ ပိုလညျး မှတျသားနိုငျမယျ ပွောရရငျတော့ အကြိုးသကျရောကျမှု ပိုရှိတာပေါ့။
၂. နယျပယျအစုံက လလေ့ာပါ
Self-study ဆိုတာနဲ့ ကြောငျးစာအုပျကွီးဖှငျ့ပွီး အခေါကျခေါကျအခါခါ ဖတျနဖေို့ ပွောတာမဟုတျပါဘူး။ လလေ့ာစရာ သငျယူစရာတှကေ အမြားကွီးပါ Articles၊ Journals၊ Novels တှဖေတျမလား ဒါမှမဟုတျ video တှကေနတေဈဆငျ့ လလေ့ာမလား၊ online course တှေ တကျမလား၊ Google ပဲသုံးမလား ကိုယျ့ဘကျက လလေ့ာခငျြရငျ study လုပျခငျြရငျတော့ နယျပယျတှကေ အစုံပါပဲ။
၃. Note မှတျထားပါ
Note မှတျတယျ ဆိုတာကလညျး အရမျးကောငျးတဲ့ အကငျြ့တဈခုပါပဲ။ ကိုယျက online ကနေ စာတှေ ဖတျလိုကျတယျ video တှေ ကွညျ့လိုကျတယျ ဆိုတာနဲ့ မပွီးသေးပါဘူး။ ကိုယျ့ဦးနှောကျက ဘယျလောကျကွာကွာမှတျထားနိုငျမှာ မို့လို့လဲ တဈခေါကျကွညျ့ပွီး တဈသကျလုံး မမတေ့ော့ဘူး ဆိုရငျတော့ တဈမြိုးပေါ့နျော။ ဒီလိုမှမဟုတျရငျတော့ ကိုယျဖတျထားတာ လလေ့ာထားတာတှကေို note လေးလိုကျမှတျထားတာ အရမျးအကြိုးရှိပါတယျ။ နောကျလိုအပျတဲ့အခါ မမှတျမိတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတျ ပွနျဖတျခငျြတဲ့အခါမြိုးဆို ကိုယျမှတျထားတဲ့ note လေး လှယျလှယျပွနျကွညျ့လိုကျလို့ ရတယျလေ။
၄. Review ပွနျလုပျပါ
Self-study တော့လုပျပါရဲ့ အမြားကွီးလညျး ဖတျတယျ၊ လလေ့ာတယျ ဒါတငျပဲလား မဟုတျဘူးနျော review ပွနျလုပျဖို့ လိုပါတယျ။ ကိုယျဘာတှေ လလေ့ာထားလဲ၊ ဖတျထားလဲ ကိုယျလလေ့ာထားတာတှေ ဖတျထားတာတှေ ကိုယျမှတျမိရဲ့လား၊ နားလညျရဲ့လား၊ တကယျအသုံးခရြဲ့လား၊ ဘယျနရောတှမှော အသုံးခလြို့ရလဲ၊ ဘာတှအေကြိုးရှိလဲ၊ ဘာတှထေပျလလေ့ာဖို့ လိုသေးလဲ ဆိုတာ သခြောပွနျသုံးသပျ ရပါမယျနျော။
၅. ကြှမျးကငျြသူတှနေဲ့ ပွောပါ
တဈခုခုကို သိခငျြရငျ ကြှမျးကငျြတဲ့သူတှေ သခြောနားလညျတဲ့သူတှဆေီ သှားတတျကွတာက သဘာဝပဲမဟုတျလား။ ဆိုတော့ ကိုယျသငျယူနတေဲ့ အရာနဲ့ပကျသကျပွီး ကြှမျးကငျြတဲ့သူတှေ၊ စီနီယာတှေ၊ ဆရာတှကေို အကွံဉာဏျတောငျးတာ၊ မေးတာတှကေလညျး Self-study လုပျတာပါပဲ။ ပွီးတော့ ပိုကောငျးတဲ့ အကွံတှေ၊ အမွငျတှကေိုလညျး သူတို့ဆီကနေ ရနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ self-study လုပျမယျဆို ကြှမျးကငျြသူတှကေို မထေ့ားလို့မရပါဘူးနျော။
ဒီအခကျြလေးတှကေ အခွခေံလိုအပျတာလေးတှပေါ။ Self-study လုပျဖို့ တခွားလုပျသငျ့တဲ့ အခကျြတှမှေ အမြားကွီးပါပဲ။ ကိုယျသငျယူနတေဲ့အရာအပျေါ တကယျကြှမျးကငျြခငျြရငျ တကယျနားလညျခငျြရငျ Self-study ကိုလုပျပေးသငျ့ပါတယျ။ တကယျဆို လူငယျတိုငျး သခြောပေါကျ လုပျကိုလုပျသငျ့တာပါ။ ကိုယျ့မှာ self-study လုပျကငျြ့လေး ရှိသှားရငျ နောကျပိုငျးကြ သူ့အလိုလိုနဲ့ လုပျဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။
Self-study ကတကယျကို အရေးကွီးတဲ့အရာမို့ သခြောအလေးအနကျထားပွီး လုပျကွညျ့ဖို့ တိုကျတှနျးပါတယျနျော။ လုပျကွညျ့လိုကျပွီးရငျ မလုပျခငျနဲ့ လုပျပွီး ကှာခွားခကျြကို သိလာမှာပါ။ အားလုံးပဲ Self-study ကောငျးကောငျးလုပျနိုငျကွပါစေ။
Self-study ဆိုတဲ့စကားလုံးက မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ သိပ်ကြီးမရင်းနှီးကြသေးပါဘူး။ Self-study ကောင်းကောင်းလုပ်နေကြသူတစ်ချို့တော့ ရှိပေမယ့် ဒါလူနည်းစုပါပဲ။ လူငယ်အများစုကတော့ မလုပ်ကြတဲ့ အပြင် Self-study ကဘာကြီးလဲလို့ ပြန်မေးတဲ့သူရှိသလို လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး လို့ခံယူကြသူတစ်ချို့လည်း ရှိနေပြန်ပါတယ်။ အါ့တွေ အသာထားဦး ပြဿနာက ဘာလဲဆိုတော့ ဆရာတွေကိုယ်တိုင် အစစအရာရာ သေချာလိုက်လုပ်ပေးပြီး အားလုံးအဆင်သင့် ဒါကိုကြည့်၊ ဒါကိုကျက်၊ ဒါကိုဖတ်၊ ဒါကိုမှတ် ဆိုတာတောင် ခပ်ပေါ့ပေါ့နဲ့ အလေးအနက်လည်းမထား ဘာမှလိုက်မလုပ်ကြတာပါ ပြောရရင် ဆရာတွေက ငှက်ပျောသီးကျွေးတာကို အခွံကအစ နွှာထားပေးပြီးသား ခွံ့တောင်ကျွေးနေပေမယ့် ဝါးစားလိုက်ဖို့လေးကို မစားနိုင် မဝါးနိုင်တွေ ဖြစ်နေကြတဲ့ သဘောပေါ့ ဒါအရှင်းဆုံး ဥပမာပါပဲ။
တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ကွာခြားနေကြရတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ ဒီတစ်ချက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ “နိုင်ငံခြားက လူတွေက အရမ်းတော်ကြတာပဲ သူတို့ပညာရေးက သိပ်ကောင်းတာကိုး ထောက်ပံ့မှုတွေ အများကြီးလေ” ဆိုပြီး ပညာရေးစနစ်ကိုပဲ လက်ညိုးထိုးနေကြတာ များပါတယ်။ ပညာရေးစနစ်က ယှဉ်ကြည့်ရင်တော့ မှန်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒါတစ်ခုတည်းကိုပဲ အပြစ်တင်နေလို့ မရဘူးလေ။ ပညာရေးစနစ် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း လူမကောင်းရင်၊ မကြိုးစားရင် အလကားပါပဲ။ သူတို့နိုင်ငံတွေမှာက ကျောင်းတွေမှာ သင်ယူတာအပြင် ကိုယ့်ဘာသာ self-study အရမ်းလုပ်ကြတာကိုး တော်မှာပေါ့။ စာတွေ အရမ်းဖတ်ကြတာကိုး သိကြမှာပေါ့။ အပေါ်ယံလောက်လေး မကြည့်နဲ့လေ။ သူတို့ဘယ်လို ကြိုးစားတယ် ဆိုတာကိုလည်း အတုယူဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါလား။
ကိုယ်သင်ထားတဲ့ဟာတွေကို review ပြန်လုပ်လား၊ ဘယ်လောက်ထိများ ပြန်လေ့လာလဲ၊ သက်ဆိုင်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ ရှိလား စာတွေဖတ်လား။ Self-study ဆိုတာက ဥပမာ ကိုယ်က Business သင်နေတယ် ဆိုရင် Business ကဘာလဲ ပြောနိုင်ရမယ် ရှင်းပြနိုင်ရမယ်။ Business နဲ့ ပက်သက်တဲ့စာတွေ အများကြီး ဖတ်ရမယ် လေ့လာရမယ် online ကနေ ရှာရမယ် သင်ထားတဲ့ Theory တွေကို ဘယ်လို လက်တွေ့မှာ အသုံးချရမလဲ လေ့လာရမယ် ဒီလိုဖြစ်နေရမှာပါ။ ဒါမှ ကိုယ်သင်ယူနေတဲ့အရာအပေါ်မှာ တကယ် ကျွမ်းကျင်မှုတွေ ဗဟုသုတတွေ ရှိလာမှာပေါ့။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ self-study လုပ်ဖို့မပြောနဲ့ ဆရာအိမ်စာ ပေးထားတာလေးတောင် မလုပ်ဘူး မကြည့်ဘူး ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။
ဒါဆိုရင် Self-study ဆိုတာက ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှု ဘယ်လောက်ရှိလဲ သိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ “Self-study တော့လုပ်ချင်တယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ” ဆိုရင် Self-study လုပ်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆို အချိန်ပေးဖို့ လိုတယ်လေ ဒီလိုပါပဲ Self-study လုပ်ဖို့လည်း သီးသန့်အချိန်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ တခြားတစ်ခုခုလုပ်ရင်းနဲ့ study လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ ရပါတယ် ဒါပေမယ့် အဲ့လောက်ကြီးတော့ effective မဖြစ်ဘူးပေါ့။ ကိုယ့်ဘာသာ လေ့လာဖို့ကို သီးသန့်အချိန်လေး သတ်မှတ်ထားတယ်၊ ပေးထားတယ်ဆိုရင် ပိုပြီးလည်း ထဲထဝင်ဝင်လေ့လာနိုင်တယ်၊ ပိုလည်း မှတ်သားနိုင်မယ် ပြောရရင်တော့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပိုရှိတာပေါ့။
၂. နယ်ပယ်အစုံက လေ့လာပါ
Self-study ဆိုတာနဲ့ ကျောင်းစာအုပ်ကြီးဖွင့်ပြီး အခေါက်ခေါက်အခါခါ ဖတ်နေဖို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ လေ့လာစရာ သင်ယူစရာတွေက အများကြီးပါ Articles၊ Journals၊ Novels တွေဖတ်မလား ဒါမှမဟုတ် video တွေကနေတစ်ဆင့် လေ့လာမလား၊ online course တွေ တက်မလား၊ Google ပဲသုံးမလား ကိုယ့်ဘက်က လေ့လာချင်ရင် study လုပ်ချင်ရင်တော့ နယ်ပယ်တွေက အစုံပါပဲ။
၃. Note မှတ်ထားပါ
Note မှတ်တယ် ဆိုတာကလည်း အရမ်းကောင်းတဲ့ အကျင့်တစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ်က online ကနေ စာတွေ ဖတ်လိုက်တယ် video တွေ ကြည့်လိုက်တယ် ဆိုတာနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး။ ကိုယ့်ဦးနှောက်က ဘယ်လောက်ကြာကြာမှတ်ထားနိုင်မှာ မို့လို့လဲ တစ်ခေါက်ကြည့်ပြီး တစ်သက်လုံး မမေ့တော့ဘူး ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့နော်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ်ဖတ်ထားတာ လေ့လာထားတာတွေကို note လေးလိုက်မှတ်ထားတာ အရမ်းအကျိုးရှိပါတယ်။ နောက်လိုအပ်တဲ့အခါ မမှတ်မိတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ပြန်ဖတ်ချင်တဲ့အခါမျိုးဆို ကိုယ်မှတ်ထားတဲ့ note လေး လွယ်လွယ်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ ရတယ်လေ။
၄. Review ပြန်လုပ်ပါ
Self-study တော့လုပ်ပါရဲ့ အများကြီးလည်း ဖတ်တယ်၊ လေ့လာတယ် ဒါတင်ပဲလား မဟုတ်ဘူးနော် review ပြန်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်ဘာတွေ လေ့လာထားလဲ၊ ဖတ်ထားလဲ ကိုယ်လေ့လာထားတာတွေ ဖတ်ထားတာတွေ ကိုယ်မှတ်မိရဲ့လား၊ နားလည်ရဲ့လား၊ တကယ်အသုံးချရဲ့လား၊ ဘယ်နေရာတွေမှာ အသုံးချလို့ရလဲ၊ ဘာတွေအကျိုးရှိလဲ၊ ဘာတွေထပ်လေ့လာဖို့ လိုသေးလဲ ဆိုတာ သေချာပြန်သုံးသပ် ရပါမယ်နော်။
၅. ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ပြောပါ
တစ်ခုခုကို သိချင်ရင် ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေ သေချာနားလည်တဲ့သူတွေဆီ သွားတတ်ကြတာက သဘာဝပဲမဟုတ်လား။ ဆိုတော့ ကိုယ်သင်ယူနေတဲ့ အရာနဲ့ပက်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေ၊ စီနီယာတွေ၊ ဆရာတွေကို အကြံဉာဏ်တောင်းတာ၊ မေးတာတွေကလည်း Self-study လုပ်တာပါပဲ။ ပြီးတော့ ပိုကောင်းတဲ့ အကြံတွေ၊ အမြင်တွေကိုလည်း သူတို့ဆီကနေ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် self-study လုပ်မယ်ဆို ကျွမ်းကျင်သူတွေကို မေ့ထားလို့မရပါဘူးနော်။
ဒီအချက်လေးတွေက အခြေခံလိုအပ်တာလေးတွေပါ။ Self-study လုပ်ဖို့ တခြားလုပ်သင့်တဲ့ အချက်တွေမှ အများကြီးပါပဲ။ ကိုယ်သင်ယူနေတဲ့အရာအပေါ် တကယ်ကျွမ်းကျင်ချင်ရင် တကယ်နားလည်ချင်ရင် Self-study ကိုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ တကယ်ဆို လူငယ်တိုင်း သေချာပေါက် လုပ်ကိုလုပ်သင့်တာပါ။ ကိုယ့်မှာ self-study လုပ်ကျင့်လေး ရှိသွားရင် နောက်ပိုင်းကျ သူ့အလိုလိုနဲ့ လုပ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Self-study ကတကယ်ကို အရေးကြီးတဲ့အရာမို့ သေချာအလေးအနက်ထားပြီး လုပ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်နော်။ လုပ်ကြည့်လိုက်ပြီးရင် မလုပ်ခင်နဲ့ လုပ်ပြီး ကွာခြားချက်ကို သိလာမှာပါ။ အားလုံးပဲ Self-study ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ကြပါစေ။
Credit : Live The Dream
how to doaselfstudy
ကြောငျးတှေ သငျတနျးတှပေိတျထားတဲ့အခြိနျမှာအိမျမှာနရေငျး အင်ျဂလိပျစာကိုအလှယျတကူလလေ့ာကွမယျ
အိမျမှာနရေငျး သငျဝါသနာပါတဲ့အရာတှကေို You Tube ကနလေလေ့ာလိုကျရအောငျ